Phupha ngenombolo yonyaka ▷ ➡ Discover online ▷ ➡️
Ngexesha lobukhosi baseRoma, iminyaka yabalwa "ab urbe condita", into ethetha into enje "ukusukela ekusekweni kwesixeko saseRoma." Nangona kunjalo, ukubalwa kwamaKristu konyaka kuqale ngokuzalwa kukaYesu kunye "neyure" yeeyure. Nokuba siyazi namhlanje ukuba uYesu akazalwanga ngeli xesha le-zero, ikhalenda yethu isekwe kule ndawo kwimbali kwaye ke amanani eminyaka adityaniswa ngokudibanisa "AD." igama.
Iminyaka isinceda ukuba siqhelane nobomi. Sisebenzisa unyaka, sinokurekhoda ukuphela kwexesha kunye nokubala ubudala babantu nezinto. Unyaka uneenyanga ezininzi, iiveki, iintsuku, iiyure, imizuzu nemizuzwana. Ezi yunithi, zona, zisinceda ukuba sinxibelelanise amaxesha kwaye sithathe isigqibo sokuba ingaba into ethile ithathe ixesha elide okanye hayi. Sinokuthatha isigqibo nangonyaka ukuba into ethile okanye umntu mdala kakhulu okanye mncinci kakhulu.
Ukuba umntu uphuphe unyaka, umntu uya kuzibuza ukuba lithetha ntoni eli phupha kwaye lihambelana njani nobomi bokwenyani.
1 Isimboli yephupha «unyaka» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Isimboli yephupha «unyaka» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «inani lonyaka» - ukutolika kokomoya
Isimboli yephupha «unyaka» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukusuka kwindawo yokujonga ukutolikwa ngokubanzi kwamaphupha, uphawu lwephupha "inani lonyaka" linokubonisa kwimicimbi yethutyana ephuphayo kwixesha elidlulileyo, langoku okanye elizayo. Ukuba ubona unyaka odlulileyo kwimeko yephupha, kufuneka uqale ucinge malunga nokuba uyayikhumbula imeko ethile kunyaka wephupha.
Into ebaluleke kangangokuba iye yanamathela ezingqondweni zethu. Ukuba oku akunjalo, inani elisuka kunyaka ophelileyo linokuchaza ukuba ngoku umntu ukhathazeke kakhulu iingxaki zangaphambili ndixakekile, mhlawumbi ndiphila kakhulu kwixa elidlulileyo kwaye ndijonge ngasemva ngokungathandabuzekiyo. Kubalulekile ukuba nantsi indlela amaphupha alandelelana ngayo.
Iimvakalelo ezimbi zihlala zibonisa ukuba umntu uyathandabuza ukukhumbula ixesha elidlulileyo. Iphupha lonyaka libonisa, nangona kunjalo, ukuba sisekude Ayizalisekanga banobunzima okanye basenoxanduva kumava adlulileyo.
Inani lonyaka elizayo, ngokutolikwa ngokubanzi kwamaphupha, lazisa ngeziganeko ezinomdla. Ukuphupha kunokujonga kwikamva eligcwele ulindelo kwaye ujonge phezulu. amava amahle ndijonge phambili.
Isimboli yephupha «unyaka» - ukutolikwa kwengqondo
Kutoliko lwengqondo ngokwamaphupha, uphawu lwephupha "unyaka" lunobudlelwane ngqo nomxholo othi "ixesha." Ujongana njani nomntu ophupha ngobomi kunye nexesha lokuphila?
Ukuthandana kwamaphupha kungaphakamisa umbuzo wokuba uphi ebomini bakho nokuba sele ufikile apho ubufuna khona okanye usajonge ngolangazelelo kwikamva, urhoxile kwinto yokuba awukafikeleli kwinjongo oyifunayo. ifikile.
Kwiphupha lonyaka, iimvakalelo ngexesha lephupha zidlala indima ebalulekileyo ekutolikweni kwephupha. Iimvakalelo ezimbi zihlala zibonisa ukuba kukho izinto kuthi esizithandayo. Mva nje hamba nathi.
Inani lonyaka ephupheni ngoku, kwelinye icala, linokusikhumbuza ukuba lixesha lokujonga ezi zinto siziphilise kuthi, mhlawumbi ngoncedo lwengqondo. Kwelinye icala, inokwenza ukuba kucace kuthi ukuba ixesha elidlulileyo lidlulileyo kwaye ikamva alikho ezandleni zethu ngokupheleleyo.
Njengophawu lokulala, unyaka unokuba ngumhlobo. Qaphela ube ephupheni, uphile kwaye ube namava obomi bakho ngokuzazi nangamandla apha nangoku. Kungenxa yokuba ukuba uhlala uhlala kwixesha elidlulileyo okanye ukhathazekile ngekamva, uphoswa lixesha lobomi
Uphawu lwephupha «inani lonyaka» - ukutolika kokomoya
Umfanekiso wephupha "inani lonyaka" liquka ukutolikwa kwephupha lokomoya i infinito yobomi kwinqanaba lokomoya, elilinganiselwe kuphela kwilizwe lethu lokucinga.